Apple Macbook Air 13in 2013 Model Buyekeza - Izindaba Rule
Izindaba ezinhle for lokuqala time Macbook Air abathengayo wukuthi bazobuyekezwa ekutholeni models esekelwe Intel Haswell ngenani lentengo eliphansi ukwedlula 2012 Macbook Air laptops. Nokho, abathengi savvy ungase ufune ukulinda kuze ekwindla ukuze uthole izandla zabo phezu Macbook Air egijima ukukhululwa Mavericks OS X
Umkhiqizo Macbook Air 13in 2013 imodeli
Iwebhusayithi Macbook Air
Imininingwane 13.3ngo-1440×900 isibonisi LED, Intel Core i5 ombaxambili-core 1.3GHz noma Core I7 ezimbili-core 1.7GHz processor, 4GB RAM, 128GB noma 256GB SSD, 802.11ac a / b / g / n WiFi ehambisanayo, Bluetooth 4.0, 2x USB 3 namachweba ngenhloso, Imbobo Thunderbolt, SDXC slot ikhadi, imibhobho ombaxambili, ngehedfoni jack, Magsafe 2 amandla port, ebalulekile 54Whr Li-Po ibhethri, 325x227x17mm, 1.35kg
THE oRIGINAL Apple Macbook Air umise ngokwaso njengoba lokuma laptops mncane futhi ukukhanya, futhi Ngokuthuthukisa yayo ukuze Intel Core chips 2011 it got umfutho ukusebenza ukufanisa nomklamo walo sleek futhi ukwakha.
The latest model 13in Apple umkhankaso ngo June okufanayo ngaphandle njengoba pretty okuningi 2011 edition, ngaphandle kwabafazi kwalokho imibhobho ombaxambili ohlangothini sobunxele. Khonamanjalo, OS X Lion ibuyekeziwe Mountain Lion – Nokho uzoba ulinde kuze ekwindla ukumbamba a Macbook Air egijima Mavericks inguqulo yakamuva – kodwa Apple uye wenza abanye ukulungisa ukuze uthole ijusi okuningi umshini.
Sake ngokuzama Macbook Air Core i5 1.3GHz imodeli 13in 4GB RAM ukubona uma ibhethri Apple izithembiso ukuphila ngokuvumelana nokulindela, yasizwa processor kusukela zakamuva Haswell processor bokwakha Intel kunokuba dlule Ivy Bridge kanye Sandy Bridge chips.
Yakha futhi design
I 13in Macbook Air akusho ngempela ukuhlangabezana izifakazo feather-ukukhanya kancane umfowenu noma udadewenu yayo 11in sika, kodwa kusenzima omunye laptops thinnest futhi elula azungeze, ngokwengxenye sibonga flash yalo isitoreji.
Kukala 325x227x17mm nesisindo 1.35kg kuphela, unezela nje ngaphansi 300g iqhathaniswa 11in 1.08kg imodeli, ekwandiseni nje 25mm ububanzi 33mm in ukujula. Ngisho ne ukuvelela ultrabooks kusukela Apple kuqala ezikhishwe lokhu laptop eminyakeni embalwa edlule, abenzi PC baye balwisana ukushayela phansi isisindo kanye nosayizi, ngenkathi esaziwa ukusebenza ehloniphekile futhi ukuphila kwebhetri ngemali ephansi.
Ngisho noma ayemancane kakhulu 13in Macbook Air anamathele-mncane futhi engasindi, izinga ukwakha kuyinto emihle nelizinze ngokwedlulele, kanti design unibody unika laptop sleek, ephezulu look. Apple uye wahlanganisa ikhibhodi 79-key isiqhingi ekhanyayo kahle alingana nale modeli 13in, kanye 12 umsebenzi okhiye umcibisholo okhiye ezine zibekwe ngendlela format kusebenziseka kalula. Amakhi abe travel ibangana, okusho kuphela touch ukukhanya edingekayo uma uthayipha.
Esinye endaweni ukhiye lapho Macbook Air oludlula iningi lozakwabo yayo Windows uncike isiqeshana sokuhambisa iminwe. Trackpad kukodwa omkhulu, futhi zinkulu ngokwanele ukwenza ngokuswayipha futhi ewa ukukhuluma ngezimpawu ezisikisela okuthile kamnandi, okwenza kube nowesivunguvungu ukupheqa up, phansi esikrinini. Kodwa waxwayisa – Uma uthola asetshenziselwa isiqeshana sokuhambisa iminwe, uzothola kunzima ukwehla emuva igundane nakho evamile.
Kulula ente trackpad ukuze asebenze ngendlela ofuna it, nge izinketho ngoba munye, amabili kuya kwamathathu ukuchofoza ngomunwe, ulicindezela kwesokudla, kanye ehudula phezulu noma phansi isiqeshana sokuhambisa iminwe. Okuwukuphela embi ngalo real sithole wukuthi isiqeshana sokuhambisa iminwe angathola glitchy – Ngokwesibonelo nokusebenza qhafaza kwesokudla- – uma uke kwadingeka Macbook yakho Air kweminyaka embalwa noma ngaphezulu.
Olandelayo: Khombisa, namachweba ngenhloso, isitoreji.
Yini embi ngalo kuqala ukuphuma endleleni wukuthi, kwashunq ', Apple ongakaze ungeze isibonisi retina kuya Macbook Air. izikrini retina ninikela 2880×1800 lesinqumo phezu 15in Macbook models Pro, kokukhulula ama more screen ingcebo ngemibala emangalisayo and definition. Nokho, unezela Retina ngabe cishe wanezela mahhala Macbook Air futhi kwehle ngo ukuphila kwebhetri.
13in Isikrini non-Retina on Macbook Air akuyona wehlele iqhathaniswa nezinye laptops, Nokho. It has an backlight LED futhi iza isinqumo esiphezulu of 1440×900, kuqhathaniswa ne 1366×768 lesinqumo esiphezulu kwi imodeli 11in. Ungakwazi futhi ukushintsha kalula ukumenyezelwa uhla ongakhetha esethiwe kuye ngezidingo zakho: 1280×800, 1152×720 nezi-1024×640 isixazululo at a 16:10 aspect ratio, noma 1024×768 800×600 isixazululo at a 4:3 aspect ratio.
Nombukiso inikeza imibala ebukhali nokukhanya, futhi akuyona lembhali incane uma iqhathaniswa eziningi laptop onobuhle sesibonile, ngakho ngeke uthole screen ukukhanya ahluke e Ukukhanya kwelanga. Isibonisi izinga okusezingeni ukubukela video noma ebukela izithombe. Inzwa ambient ubuye a touch enkulu njengoba ivese ushintsho ukukhanya kwesikrini futhi kukhanyisa kwekhibhodi, okusho ungasebenzisa Macbook Air ekamelweni omnyama futhi namanje kalula ubone yonke okhiye futhi isikrini.
Noma ubani kokudinga laptop kunothile zokuxhuma ongowokuzalwa kufanele abheke kwenye indawo. I chassis ecishe ibe iphepha-mncane umane akuhambisani ezihlukahlukene kwamachweba.
On the lwesokunxele the 13in Macbook Air, uzothola exhumanisayo amandla, a USB port, embobeni izisekelo kanye imibhobho ombaxambili. Ikhwalithi yomsindo ehloniphekile kwi-Macbook Air, nakuba uma uhlela on usebenzisa izikhulumi njalo ukuze ukubukela amabhayisikobho noma TV, noma webconferencing, ungafuna kungaba ukutshala pair ukhululekile ezinye izipikha kumbe ukuthenga ezinye izikhulumi extra, nevolumu esiphezulu akuyona elikhulu kakhulu.
On the right, Apple ungeze yesibili USB port, a single Thunderbolt Isixhumi futhi i slot SDXC ikhadi, into wanikela phezu imodeli 11in.
I-Macbook Air lwakhiwe yokuphatheka, ngakho kuyadingeka ukuze nquma izici like oshayelayo optical ngisho port Ethernet. Nokho, kulabo happy bangathembeli kwe-WiFi, ungakwazi ukuthenga i-adaptha Ethernet ukuze sivale ethekwini USB, nesisekeli sithole Ukugunda eminyakeni engaphezu kwengu zethu sisebenzisa i-Macbook Air.
Ukwengeza echwebeni Thunderbolt iya ngandlela-thile towards ukunciphisa ukuntuleka abanye. Akukhona nje kuphela ukuthi echwebeni ukunikeza ukudluliswa izivinini ukuthi zisesikhathini 20 Izikhathi ngokushesha ukwedlula USB yendabuko, kubuye kwenze Macbook Air ukuxhuma nge VGA, HDMI, mini Bonisa Port DVI amadivayisi nge adapters.
Ngeshwa, kuphela ikhebula amandla inikezwe ebhokisini, konke okunye engidinga ithengwe njengenhlangano extra ozikhethela.
Kuyilapho 11in Macbook Air wathola izinga isitoreji ne batch yakamuva ukukhishwa – amamodeli 13in base ezingabanjwanga off ohlwini kubuyekeze, iza 128GB efanayo futhi 256GB takhiwo.
Olandelayo: Isistimu esebenzayo.
Omunye embi ngalo of egijimela out ukuthenga entsha Macbook Air okwamanje ukuthi imikhumbi Mac OS X 10.8.4 Mountain Lion, ngakho lapho update Mavericks OS uyaphuma kule ekwindla uzoba kufanele ukhokhe ukuze uthuthukise. Mavericks siyonezela izici ezintsha eziningana Ukugunda, kuhlanganise nekhono ukusindisa kanye amafayela group by tags kunokuba amafolda, futhi amaningi qapha ukweseka.
Nokho, Mountain Lion namanje eziklanywe kahle futhi kusebenziseka kalula OS, futhi ngeke sizifake kulabo abasanda Mac OS isikhathi esiningi ukuze uthole nokujwayela uma uqamba ziguquka zisuka PC ngokokuqala ngqá. Lena into angeke kushiwo kubasebenzisi babesuka amadala Windows izinguqulo ukuba Windows 8, ngokubona kwethu.
Out of the ukufakwa ebhokisini kuthatha imizuzu embalwa nje, futhi kufuna nje ID Mac ukudaleka, internet amisiwe bese uku off. Ungase futhi ukuphindaphinda okuqukethwe okuvela komunye Macbook amadala ungene imodeli entsha, okuzokwenza inqubo kokuthola wonke amafayela akho kanye izintandokazi ngisho bushelelezi, nakuba lokhu kuyokwenezela isikhathi inqubo yokusetha.
Mountain Lion unamathela multi-touch ukushukuma komzimba kubonwe okunje kwa-esasisandulele. Ukuswayipha iminwe emithathu liye phezulu ku-trackpad oyenza isebenze Mission Control, okuyinto rearranges ngokuzenzakalelayo iskrini ukuveza zonke izinhlelo in umbono wamehlo yenyoni. amaqembu Mission Control izinhlelo ezifanayo ndawonye ukuze lewebhu othize noma idokhumenti ingatholakala kalula in isihlenga of amafasitela evuliwe.
Imininingwane engeziwe multi-touch ukusebenza kuhlanganisa ingcosana ukusondeza, plus ikhono ukushintshanisa izithombe bese ushintsha phakathi zokusebenza besebenzisa isiqeshana sokuhambisa iminwe. Uma usebenzisa i-lewebhu, kungenzeka ukuba swayipela kwesokunxele bese kwesokudla ukuya emuva naphambili phakathi amakhasi, Esinye isici esincane kodwa isikhathi zokusindisa.
Ngokungafani on a PC, abasebenzisi kudingeka ukuba swayipha ngeminwe emibili ku-trackpad ukuze uhambise phansi on ikhasi, noHezekeli, nakuba lokhu akuzange kuthathe isikhathi eside ukujwayela.
anezele okuphawulekayo Mountain Lion zihlanganisa a Center Isaziso, okuyinto afinyelelwe evunyelwe logo esanda wanezela on the ngakwesokunene kwesikrini noma ngokuswayipha iminwe emibili kusukela kwesokunxele kuya kwesokudla isiqeshana sokuhambisa iminwe. Skrola up lapho Izaziso Center uzobona inkinobho yokuguquguqula ezikuvumela ukuba ushintshele ku-screen izaziso on and off, uma ungenawo fancy kokuba ukhathazwa bubble pop-up sonke isikhathi uthola isaziso Twitter noma i-imeyili.
Apple iCloud is more ngokujulile bafakwe Intaba Lion, okuyinto izindaba esihle kakhulu Mac abanikazi futhi baye olunjengemfoloko out for an iPhone noma iPad. Uma ungene ngemvume nge ID yakho Apple, iCloud kukuvumela ukukhetha ukuthi yiziphi izinsizakalo ofuna uvumelanise, kuhlanganise Mail, Oxhumana nabo, amakhalenda & Izikhumbuzo, amanothi, Safari, Stream Photo and Imibhalo. Uma uke ezikhethiwe izinqumo zakho, Apple ngeke uqalisa ukuvumelanisa idatha kusuka yakho iOS kumadivayisi ungene computer kanye noHezekeli yakho.
In the version yakamuva isiphequluli Safari, Apple qhebeza phezulu nga-Google Chrome nge Smart Ukucinga yekheli yayo futhi fast ukulayisha izikhathi. Its enwetshiwe ngamathebhu ukuphequlula and multi-touch ukushukuma komzimba zikwenza flicking ngokusebenzisa amawebhusayithi multiple lula kunangaphambili, nezintsha yayo “ukwabelana” Isici kungenye kwalokho nice, olwenza abasebenzisi ukwabelana amakhasi ewebhu nge Twitter, imeyili noma iMessage. isikhalazo esinalo ukususwa RSS feeds kokubekwe isiphequluli sewebhu, futhi kusukela isicelo Mail.
Olandelayo: Performance, ibhethri.
I lokulungiswa Intel Haswell bokwakhiwa Core chips yakamuva Macbook Air ngeke ngikunike ukusebenza umfutho obonakalayo phezu wangaphambilini Macbook Air models. Thina njalo sebenzisa 2011 Macbook Air, futhi lokhu kungaphezu ukusisingatha kwansuku imisebenzi, futhi egijima zokusebenza resource-hogging like Adobe InDesign.
Thina yahlola model yakamuva 13in isebenzisa Intel Haswell based i5 Core ezimbili-core 1.3GHz processor 4GB inkumbulo 1600MHz DDR3, okuyinto kungenziwa ngcono uhlelo Intel Core I7 ezimbili-core 1.7GHz processor eno Turbo Boost up to 3.3GHz. Ukusebenzisa Macbook Air amasonto ambalwa njengoba umsebenzi wethu umshini, sathola ukuthi ukusebenza ikhona sasifana imifanekiso amadala. Izicelo bayashesha kakhulu ukuvula, upheqa iwebhu abushelelezi futhi fast, futhi OS X ilula futhi kulula ukuzula. Nokho, ngoba kanzima duty like video avamile kuhlela bunjalo bembhalo kanye processing noma CAD, singathanda luleka uya for Macbook models Pro noma i-desktop.
Where Haswell uye wenza umehluko ukuphila kwebhetri. Apple ngokuvamile eze ne ukuphila kwebhetri omuhle futhi yakamuva Macbook Air kuthuthukisa ngisho ngale, okuyinto ikakhulukazi esihlaba umxhwele idivayisi engasindi ezifana.
Apple quotes kuze kufinyelele 12 amahora lokufinyelela web wireless, noma 10 Amahora angu-iTunes ifilimu sokudlala ngoba 13in Macbook Air kusuka esakhelwe ngaphakathi yayo, 54WHR lithium-polymer battery. Ekuhlolweni zethu wangempela, sasingabantwana pretty ujabule ukuphila kwebhetri, ikakhulukazi uma kuqhathaniswa nabangu yethu 2011 11emthandazweni. With the izilungiselelo amandla isethwe okumisiwe kanye auto ulungise ukukhanya, sakwazi ukuthola amahora egcwele ayisishiyagalombili aphume imodeli 13in, kuhlanganise ezimbili ezihlukene ngomzuzu-30 nezikhathi ubuthongo.
Lokhu kungenzeka ngempela ukufinyelela ezindaweni eziphakeme heady of 12 amahora njengoba ecashunwe ngu Apple, kodwa sasizimisele egijima Macbook Air in ombaxambili qapha format ezimweni pretty bright, futhi egijima uhla izicelo eziningi phakathi nosuku. Futhi uma kuqhathaniswa ne amahora amathathu 11in yethu 2011 Macbook Air okwenzayo, amahora ayisishiyagalombili kuyinto sindiso.
Naphezu kokulinganiselwa zokuxhuma, design namandla eluhlaza ukwenza Macbook Air ukuthenga emihle abasebenzisi Apple noma labo abafuna ushintsho Windows. Ungakwazi ukusebenzisa noma yiziphi izinhlelo zokusebenza uzodinga ngoba usuku jikelele ukusetshenziswa usuku, futhi isiqeshana sokuhambisa iminwe kanye Mac OS X enze Macbook Air nemnandi ukusebenzisa.
Izindaba ezinhle for lokuqala time Macbook Air abathengayo wukuthi bazobuyekezwa ekutholeni models esekelwe Intel Haswell ngenani lentengo eliphansi ukwedlula 2012 Macbook Air laptops. Nokho, abathengi savvy ungase ufune ukulinda kuze ekwindla ukuze uthole izandla zabo phezu Macbook Air egijima ukukhululwa Mavericks OS X. m
uHlelo, design slimline, ukuphila omkhulu ibhethri, intengo okungabizi.
Ilinde Mavericks, akukho isibonisi Retina.
umthombo Article by repost: http://www.theinquirer.net/inquirer/review/2291318/macbook-air-13in-2013-model-review
13e Macbook Air, I-Apula, Haswell, Intel, Intel Core, Macbook Air, Thunderbolt (isikhombikubona), Wi-Fi
← Earthwise TC70001 Electric Tiller uMlimi ukubuyekeza A Color Indaba The omsakazo →